Maitiro ekuwedzera uye kugadzira inoenderana chero ebook neako Kindle uchishandisa Teregiramu | Gadget nhau
Maitiro ekuwedzera uye kugadzira inoenderana chero ebook neako Kindle uchishandisa Teregiramu
Ruben gallardo | | vaverengi, Tutorials
Kunyangwe Apple nemamwe makambani vagara vachida kutora chidimbu chavo chekeke kubva kue-bhuku indasitiri, ichokwadi zvakare kuti kwagara kune mambo mumusika uyu: Amazon neayo Kindle chikuva. Iyo e-commerce hofori yakagara ichiziva kuve neyakakura katarogu yemadhijitari akanyorwa uye zvakare - uye kwete - kupa vashandisi vayo maturusi kuitira kuti vagone kunakidzwa nemabhuku zviri nyore.
Chaizvoizvo, isu tinoreva iwo Mhando uye dzakasiyana dzakasiyana. Iwo zvikwata izvo ipa yakanaka mushandisi ruzivo uye usanete maziso ako kana iwe uri mumwe weavo vari kuverenga kwemaawa: vanoshandisa tekinoroji yemagetsi. Zvino, senguva dzose, pane "asi" mukushandisa kwayo. Uye iwe unopihwa mhosva yekugara uchishandisa ma ebook mune avo mafomati.
Sezvo zvataurwa pane akati wandei, uye sekutaura kweAmazon pane dzakawanda, iyo kambani inobatsira kubva kune yayo masevhisi kwete kubva kune iyo Hardware yainotengesa. Uye zvinoita sekunge zvinhu hazvisi kushanda mushe. Zvisinei, Imwe yematambudziko makuru eMhando ndeyekuti fomati yavanotsigira ndeye .MOBI. Uye kana uri wenguva dzose mumhando iyi yemabhuku emagetsi, iwe unozoziva kuti kune akasiyana mafomati pamusika uye kuti mamwe mapuratifomu ekutengesa anoratidza. Tinoreva .EPUB. Chii chinoitika kana iwe ukatenga bhuku remagetsi - ebook - kunze kweAmazon uye uine Kindle? Mhinduro haina tariro zvakanyanya: kungave iwe wakasara usina kunakidzwa nemusoro wenyowani; kana urikutsvaga mumwe muverengi; kana kushandura iyo fomati kuva Kindle inoenderana imwe. Uye izvi zviri nyore kwazvo kana tikashandisa bot kubva kune yakakurumbira meseji yekutumira mameseji Teregiramu.
1 To Kindle Bot: zvaunoda kutanga kuishandisa
2 Seta Kindle Kuti Bot muakaunti yako yeTeregiramu
3 Kutanga kushandisa "To Kindle Bot" paTeregiramu
To Kindle Bot: zvaunoda kutanga kuishandisa
Kana iwe uchiri kufunga kuti Teregiramu iri nyore nyore kutumira mameseji sevhisi, iwe watadza kwazvo. Hungu hongu, ndizvo zvakare. Asi sevhisi iyi ine mikana yakawanda kupfuura iwe zvaunofunga. Pamusoro pekunge uine migero pane chero chidzidzo chaunofarira - hongu, iyo zvakare inotapurwa nekutumirwa kwezvinhu zvine copyright-, zvakare ine maturusi anonakidza senge atino tiratidza kwauri nhasi: Ku Kindle Bot.
Aya bots ari yechitatu-bato kunyorera iyo inoshanda mukati meTeregiramu ecosystem. Uye mune ino chaiyo kesi inoshanda neako Kindle account, iyo iwe yaunovhura kekutanga iwe paunotanga kushandisa Amazon's digital kuverenga chikuva. Zvakanaka, tora Teregiramu papuratifomu yesarudzo yako. Rangarira kuti iwe unogona zvakare kuishandisa kuburikidza nebrowser yako kana kurodha pasi desktop application uye ugone kuishandisa nekombuta yako. Izvo zvakati, iwe uchadaro wedzera iyo To Kindle Bot kuaccount yako uye tanga kuishandisa. Asi chii chaunoda kuti uigadzirise?
Seta Kindle Kuti Bot muakaunti yako yeTeregiramu
Pachave nezvinhu zviviri izvo ino yekutanga Teregiramu Bot inokukumbira iwe kuti utange kuishandisa. Chii chimwe, kana uchinge wawedzera icho kuaccount yako, iwe uchaona kuti iwo mirairo inowoneka muChirungu. Chii chinokumbira kwauri? Zvakanaka chinhu chekutanga ndechekuti iwe pindura kuendesa yako yakasarudzika Kindle account. Ndokunge, iyo iine chimiro chinotevera: username@ Kindle.com. Kuti uwane izvo chaizvo email yako yakasarudzika kero iri, pinda muakaunti yako yeAmazon uye enda kudonhwe-pasi menyu chikamu "Chengetedza zvirimo nemidziyo".
Matafura akasiyana achaonekwa, yekupedzisira iri iyo inoratidza "Zvirongwa". Dzvanya pairi uye muchikamu Kugadziriswa kwemagwaro ako ega » iwe uchaona iyo ruzivo nezve yako account @ kindle.com. Paunongotumira account iyi kuBot (To Kindle Bot), ichave nguva yekuwedzera account yeemail iyo sevhisi inokupa iwe.
Iyi account inofanirwa kuwedzerwa kuchikamu che «Chinyorwa chemakero anotenderwa e-mail ekutumira zvinyorwa zvemunhu". Iyi sarudzo yakadzikira zvishoma pane yakapfuura nhanho. Iwe uchaongorora kuti yako yega email account inowanikwa zvakare. Pinda iyo email account iyo inokuudza iwe kuti Kindle Bot uye ndizvozvo.
Kutanga kushandisa "To Kindle Bot" paTeregiramu
Ichave nguva yekutanga kuishandisa. Unganidza mabhuku mu .EPUB, semuenzaniso, iyo iwe yaunoda kushandura kuti ugone kuiverenga kubva kune yako Kindle muverengi. Tumira iyo faira [s] kuBot uye shanduko haitore anopfuura maminetsi maviri eawa. Chii chinoitika ipapo? Matanho ese apfuura atakaita kumisikidza iyi Bot anga ari ekuona kuti kana shanduko ku .MOBI fomati yaitwa, bhuku racho rinobva rangoiswa kuacomple account yako.
Iwe unofanirwa kumirira maminetsi mashoma kuti bhuku riwonekwe. Uye zvichaita saizvozvo muchikamu cheMhando dzemagwaro; ndiko kuti, munzvimbo imwechete kubva uko ese marudzi emafaira anotumirwa - kazhinji muPDF fomati - kuti iongororwe kubva kune inozivikanwa bhuku muverengi. Pakupedzisira, rangarira iwo Mutsa inogona kushandiswa zvese zviri muverengi webhuku, mune piritsi kuburikidza nemaapplication epamutemo, mune smartphone kana kubva pakombuta.
* Ongorora: kubva kuActualidad Gadget isu hatisi mhaka yekushandisa kunopihwa iyi Bot. Isu tinonzwisisa kuti zvese zvinhu zvinoshandurwa zvakawanikwa zviri pamutemo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Tutorials » Maitiro ekuwedzera uye kugadzira inoenderana chero ebook neako Kindle uchishandisa Teregiramu
Javier Mercade akadaro
Iyo bot inondiudza kuti ini ndinogona chete kungoita mashanu kutendeuka pamwedzi ...
Pindura Javier Mercadé
2.000 XNUMX manyepo ekunyepedzera kumeso mukupedzisira kweChampions League
NVIDIA inozopedzisira yabvisa chirongwa chayo chekupokana